Akhriso Shanta qodob ee ugu kulul ee kamid ah war murtiyeedka maamul Goboleedyada - Caasimada Online
Home Warar Akhriso Shanta qodob ee ugu kulul ee kamid ah war murtiyeedka maamul...
Akhriso Shanta qodob ee ugu kulul ee kamid ah war murtiyeedka maamul Goboleedyada
Baydhabo (Caasimadda Online) – Madaxda Maamul Goboleedyada oo laba Maalin uu uga socday shir Xasaasi ah Magaalada Baydhabo ee Xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa maanta soo saaray war murtiyeed kulul.
Haddaba waxaan idinla wadaageynaa Shanta qodob ee ugu kulul ee kamid ah qodobada kasoo baxay Kulanka Madaxda maamul Goboleedyada.
Qodobada ugu kulul ayaa ku saabsan Dhaqaalaha soo galo dowladda dhexe, Amniga, Xiriirka sii xumaanayo ee ka dhaxeeyo Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale culeys ay Maamul Goboleedyada qaar sheegeen inay kala kulmayaan dowladda dhexe.
Halkaan hoose ka akhriso qodobadaas oo faahfaahinsan
1) lyadoo laga duulayo nooca dowladnimo ee dadka soomaaliyeed doorteen oo ah habka Federal, Goluhu wuxuu isla qiray in masuuliyada kowaad ee xal u helida dhibaatooyinka dhaqaale, amni, ganacsi iyo bulsho ee dadka dowlad goboleedyada haysta ama soo food saara, uu waajib ka saaranyahay hogaamiyeyaashooda, Sidaas darteed Goluhu wuxuu soo dhaweynaysaa cid kasta oo gacan tageero ka gaysan karta bahiyahooda.
2) Goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya Dowlada Federalka Soomaaliya iyo wadamada isu tagga Emarat-ka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudiga taas oo loo arko in dowladu dhinac la jirto, wayna cadahay in hadii uu khilaafkani sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi, deegaan, dhaqaale iyo maaliyadeed ee sadexda dal iyo sadexda shacab wadaagaan. Sidaas darteed, Goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowlada Federalka in ay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgalinayo danaha dadka iyo dalka Soornaaliyeed.
3) Waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabida miisaaniyada dalka oo dowlada dhexe ka hesho dalal iyo hay’ado kale ee deeq bixiyeyaal ah, mid marta xisaabta dhexe ee Dowlada dhexe ama ha noqoto mid aan soo marin, waxaase dhacda in dhaqaalahaas aysan waxba ka soo gaarin dowlad goboleedyada, sidaas darteed Goluhu wuxuu ku dhiiri galinyaa dalalkaas iyo hay’adahaas in ay sameeyaan qoondeyn ku salaysan labada heer dowladeed si loo xaqiijiyo midnimada iyo isku haynta dalka.
4) Goluhu wuxuu walaac ka muujiyey fara galinta mar walba lagu hayo hanaanka siyaasadeed ee dowlad goboleedyada taas oo keeni karta arnni daro baahda, sidaas darteed Goluhu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo faragalintaas islamarkaana xooga la saaro la dagaalanka aragagaxisada iyo dib u dhiska wadanka.
5) Sidoo kale Goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hada Dowlada dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin balan qaadkeedii ku xusnaa qodobka 1.2 ee heshiiskii Golaha Amniga qaranka ee la gaarey 10 bishii Febraayo 2018 kaas oo sheegayey “Dowladda federaalku waxay ko caawinaysaa aidamada Booliska Dowlachgoboleedyada oo ay kujiraan daraawishta (Hub, Saanad, Agab anion, Raashin, Dawo, Gunn Tababar iyo Tayayn), ee kala qeyb qaadan doom Ciidanka Xoogga Dalka Soornaallyeed (CODS) hawlgalada clidan ee lagula dagaalamayo argagixisada”. Sidaas darteed wuxuu Goluhu si adag ugu baaqayaa Dowlada dhexe in ay ka dhabeyso balanqaadkeedii ku aadanaa taakulaynta ciidamada Dowlad Goboleedyada gaar ahaan in la dardergaliyo qaybinta agabka ciidan ee hada yaaala, si hawlgalada ciidan ee xoreynta dalka loogu isticmaalo.